Etu esi kesaa ọnọdụ gị na WhatsApp na ezigbo oge | Gam akporosis
Etu esi ekekọrịta ọnọdụ gị na WhatsApp
Edere Ferreno | | Gam akporo Ndị aghụghọ, Whatsapp
WhatsApp bụ otu n'ime ngwa ndị anyị na-eji ihe ọ bụla kwa ụbọchị na gam akporo. N’ọtụtụ oge, anyị na-eji ya ahazi nzukọ anyị na ndị enyi anyị ma ọ bụ onye anyị ga-akpọ. Ya mere, enwere ike bụrụ na ajụjụ nkịtị na nkata ndị a bụ na mmadụ na-ajụ anyị ebe anyị nọ. Anyị nwere ike iji ederede zaa, kamakwa ịkekọrịta ebe ahụ.
N'ụzọ dị otú a, onye a ga - enwe ike ihu maapu gosi ebe o no nke anyi huru onwe anyi n'oge ahu. N'ihi ya, ọ bụ ọrụ ga-abụrịrị mmasị nye ọtụtụ ndị ọrụ WhatsApp. Anyị na-egosi gị otu esi eji ya n'okpuru.
Iji mee nke a, anyị ga-emerịrị tinye nkata na WhatsApp nke anyị na onye ahụ nwere. Pịa na ederede ederede dị na ala nke ihuenyo ahụ, ebe anyị ga-ede ozi ahụ. N'ebe ahụ, anyị ga-pịa akara ngosi clip dị n'akụkụ aka nri nke igbe ahụ.
Esi igbachi WhatsApp site na paswọọdụ
Yabụ, anyị nwetara ọtụtụ nhọrọ nke ịhọrọ. Otu n'ime nhọrọ n'okwu a bụ Ọnọdụ, nke bụ nke anyị ga-pịa. Mgbe ahụ, a ga-ewepụta map na-egosi nke ọma, yana nhie ụzọ 60 mita, ọnọdụ ebe anyị nọ n'oge ahụ. Mgbe ahụ ị pịa pịa izipu ọnọdụ.
Ya mere onye a ị nwere ike ịhụ maapụ na nkata na WhatsApp, ebe egosiri onodu anyi. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-achọ anyị ma ọ bụ na ị maghị etu esi aga ebe anyị nọ, ị nwere ike ime ya n'ụzọ a na-enweghị oke nsogbu. Dịka ị pụrụ ịhụ, e gosipụtara ya dị ka nhọrọ bara ezigbo uru.
Ọrụ a zuru oke, dị ka enwere obere ohere maka njehie na ọnọdụ ha gosipụtara. Yabụ ị nwere ike izipu ya na kọntaktị niile ịchọrọ na WhatsApp, mgbe ọ dị mkpa, ọ ga-egosi ọnọdụ ahụ n'oge ozugbo na-enweghị oke nsogbu. Nwetụla mgbe ị na-eji nke a mma?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Whatsapp » Etu esi ekekọrịta ọnọdụ gị na WhatsApp
Ezigbo foto ndị a na-ebo ebubo nke OnePlus 7T Pro pụtara
Agha n'etiti ndị egwuregwu 2 na ntanetị n'ịntanetị nke Heroic Magic Duel